ထရိန်နင် အလုပ်သင် အပိုင်း ❺ သတိပြုစရာ စာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများ | Working Friends
ထရိန်နင် အလုပ်သင် အပိုင်း ❺ သတိပြုစရာ စာချုပ်ပါအကြောင်းအရာ
2018年2月5日 2018年3月2日 MJ
မြန်မာမှ ဂျပန်သို့ ထရိန်နင် အလုပ် နဲ့ လာလုပ်လိုသူများ အတွက် အတွေ့အကြုံ တချို့ ရေးပေးနေသော MJ ပါရှင်။
ထရိန်နင်အလုပ်သင် ဗီဇာနဲ့ ဂျပန်သို့လာရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ခဲ့ရ မလဲလို့ သိလိုသူများ အတွက် အဆင့်ဆင့် ရေးပေးလာခဲ့တာ မကြာခင် ပြီးပါတော့မယ်နော်။
ဒီတစ်ပါတ် ဆက်ရေး မှာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အကြိမ်က စာချုပ်ချုပ်တဲ့ အခါ ၊ စာချုပ်ပါ အချက်တွေကို ကာယကံရှင်ဘက်ကလဲ သိစေချင်လို့ပါ။
ဂျပန်လာရ ပြီးရော ဆိုပြီး စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးရင် နောက်မှ ပြင်မရတာမျိုး ကြုံမှာစိုးလို့ပါ။ ဂဃနဏ ကြိုတင် သိထားတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။
၂။ ကုမ္ပဏီ လိပ်စာ
၃။ လုပ်ရမည့် အလုပ်အမျိုးအစား
၄။ အလုပ်မှ တစ်နာရီ ပေးငွေ (သတ်မှတ် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ)အထိ ရေးသားတင်ဆက်ထားပါတယ်။
အခု နောက်အဆက် (၅)မှ စရေး ပါမယ်နော်။
၅။ အလုပ်ချိန် (စချိန်၊ဆင်းချိန်)
၈။ အလုပ်လုပ်ရမယ့် ကာလ (သတ်မှတ်နှစ် အရေအတွက်)
■ အလုပ်ချိန် (စချိန်၊ဆင်းချိန်)
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ် လုပ် ချိန်ကို တစ်နေ့ ၈ နာရီ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အလုပ်စချိန်က အလုပ်ဌာနအလိုက် အချိန်အမျိုးမျိုး ရှိပေမဲ့ များသောအားဖြင့် ပုံမှန် အလုပ်ချိန်ကတော့ ၈ နာရီကြာ ပါပဲရှင့်။ အလုပ်ချိန်ချည်းပဲ ၈နာရီပါ။ နားချိန်ထည့်တွက်ရင် ၈နာရီကျော်၊၉နာရီလောက်ပေါ့။
( ၈နာရီထက် ပိုလုပ် ရရင်တော့ အိုဗာတိုင်/ အချိန်ပို ဆင်းတယ် ခေါ်ပါတယ်။အချိန်ပိုက တစ်နာရီ ရငွေကလည်း မူလပုံမှန်အလုပ်ချိန်တစ်နာရီခထက် ၂၅% တိုးရ ရပါမယ် )။
တစ်ခါတခါ ညသန်းခေါင် ( 深夜しんや )အလုပ်ဆင်းပေးရတဲ့ အချိန်မျိုးဆိုရင် ပုံမှန်တစ်နာရီ ရငွေထက် ၃၅% ပိုရရပါဦးမယ်။ ရပိုင်ခွင့် အမျိုးမျိုး ရှိတာကြောင့် ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့် ကိုယ် သေချာသိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် နော်။
အလုပ်နားချိန်ကတော့ တနေ့ ၈ နာရီ အလုပ် လုပ်တဲ့ အခါ နားချိန်က ၁ နာရီပေါ့။ ဒီတော့ အလုပ်ထဲ ၉ နာရီ ရှိရမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါရှင့်။
တချို့တွေက ၂၄ နာရီ စက်ရုံ အလုပ်တွေမို့ စက်က မနားဘဲ လူပဲ တနေ့ ၈ နာရီကြာနှုန်း နဲ့ ခွဲလုပ်ကြရပါတယ်။ ဒီလို ကြုံလာရင် သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် စက်ရုံသို့ အတူရောက် အလုပ်လုပ်ပေမဲ့ နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်း ဆိုတဲ့ အချိန်ခွဲခြားခံထားရတဲ့ အခါ တယောက်နဲ့ တယောက်တောင် သေချာမတွေ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ ထူးခြားမှု တစ်ခုလို့ ပြောရမလား။ခံစားကြည့်ပေါ့နော်။
တစ်ချို့ အလုပ်နားချိန် တစ်နာရီကို သတ်မှတ်ချိန် တစ်နာရီလုံး ရတဲ့ ကုမ္ပဏီ/ဌာနတွေ ရှိသလို။ တချို့ ကုမ္ပဏီ/ဌာနတွေကတော့ ၃၀မိနစ် + ၁၅မိနစ် + ၁၅ မိနစ်), ( ၃၀မိနစ် +၁၀မိနစ် +၁၀မိနစ် +၁၀မိနစ် ) ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ခွဲ နားပေးတာလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ခြားပုံစံနှင့် အနားပေးတာလည်း ရှိပါတယ်နော်။
■ အလုပ် ပိတ်ရက်
အလုပ်ပိတ်ရက် ဆိုတာ ကတော့ များသောအားဖြင့် တစ်ပါတ် ၂ ရက် ပိတ်ကြပါတယ်။ စနေ တနင်္ဂနွေ တွေ အပိတ်များသလို။ စနေ တနင်္ဂနွေ ပိတ်မရတဲ့ အလုပ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဆေးရုံ ဟိုတယ် စူပါမားကတ် စတာတွေပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝင်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ စာချုပ်ပါအတိုင်းပဲ ပိတ်ရက် သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။မရခဲ့ရင်. စာချုပ်လေး သက်သေပြလို့ ရတာပေါ့နော်။
တကယ်လို့ ..သတ်မှတ်ပိတ်ရက်မှာ ဆင်းပေးရတဲ့အခါ ပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုးရိုးအလုပ်ရက်ထက် ငွေပိုရရမှာပါ။
ဂျပန်တွေလည်း တိကျ ကြပါတယ်လေ။ ကိုယ်လည်း တိကျပေးလိုက်ပေါ့။
■ အလုပ်မှ သတ်မှတ် လစာ
ဆိုလိုချင်တာက စာချုပ်ထဲကလို လစာ လို့ ပြောပြီး။ ဂျပန်ရောက်တဲ့ အခါ ထင်သလို ငွေ မရ ခဲ့ရင် စာချုပ်ပြပြီး အလုပ်အချိန်ပေးဖို့ ငွေပေးဖို့ တောင်းဆိုလို့ ရပါတယ်။
( တစ်ချို့ အလုပ်ပါးလို့ ဆိုပြီး အလုပ်ချိန်လျှော့ ရငွေလျော့ တာတွေ ဖြစ်တတ်လို့ပါနော်)
■ အလုပ်လုပ်ရမယ့် ကာလ (သတ်မှတ်နှစ် အရေအတွက်)
မြန်မာပြည်ကနေ စာချုပ်ချုပ်စဉ်မှာ ကာလက ၃နှစ်မှ ၅ နှစ် စာချုပ်ပေါ့နော်။ ပုံမှန်ကတော့ ၃နှစ်များပါတယ်နော်။
ခုနောက်ပိုင်း ၃ နှစ် စာချုပ်တင်မက ၅ နှစ် စာချုပ်ထိ လုပ်ခွင့်ရတဲ့ စာချုပ်များပါ ရှိလာပါပြီမို့ ကံကောင်းသူတွေလည်း တိုးလာကြပါပြီ။ရှားတော့ ရှားပါသေးတယ်လေ။
ဂျပန်ရောက်လာရင် စာချုပ်သက်တမ်းအပြင် နှစ်စဉ် အလုပ်သင်စွမ်းရည်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး သက်တမ်းတိုးမတိုး ကွာခြားသွားတာလည်း မမေ့ပါနဲ့နော်။ စာမေးပွဲအောင်မှ သက်တမ်းတိုးတာပါနော်။
စာချုပ်အကြောင်း တိုတိုလေးရေးရင် ဒီလောက်ပါပဲ။
MJ ရဲ့ ဒီတစ်ပါတ် စာကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ခွင့် ပြုပါနော်။ ရှေ့တစ်ပါတ်မှာတော့ စာဖတ်သူငယ်ချင်းအားလုံး အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ပြီးနောက် အလုပ်သင်ကာလ ၃ နှစ်တာ အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ၅ နှစ်တာအထိ နေထိုင်ခွင့် ရမယ့်အကြောင်းလေးတွေကို ရေးပေးပါ့မယ်နော်။
ဒီတော့ လာမဲ့ အကြိမ်မှာ အလုပ်သင် ရဲ့ ၃ နှစ်တာ ကာလအပြည့် ဂျပန်မှာ အောင်မြင်စွာ နေထိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ရေးကို ရည်ရွယ်ရေးပါမယ်။
မေးချင်တာ ရှိရင်လည်း မေးထားနိုင်ပါတယ်လို့။
မွနျမာမှ ဂပြနျသို့ တရိနျနငျ အလုပျ နဲ့ လာလုပျလိုသူမြား အတှကျ အတှအေ့ကွုံ တခြို့ ရေးပေးနသေော MJ ပါရှငျ။
ထရိနျနငျအလုပျသငျ ဗီဇာနဲ့ ဂပြနျသို့လာရငျ ဘယျလို လုပျရမလဲ။ ဘယျလို ပွငျဆငျခဲ့ရ မလဲလို့ သိလိုသူမြား အတှကျ အဆငျ့ဆငျ့ ရေးပေးလာခဲ့တာ မကွာခငျ ပွီးပါတော့မယျနျော။
ဒီတဈပါတျ ဆကျရေး မှာကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ အကွိမျက စာခြုပျခြုပျတဲ့ အခါ ၊ စာခြုပျပါ အခကျြတှကေို ကာယကံရှငျဘကျကလဲ သိစခေငျြလို့ပါ။
ဂပြနျလာရ ပွီးရော ဆိုပွီး စာခြုပျကို လကျမှတျထိုးရငျ နောကျမှ ပွငျမရတာမြိုး ကွုံမှာစိုးလို့ပါ။ ဂဃနဏ ကွိုတငျ သိထားတော့ ပိုကောငျးတာပေါ့နျော။
၂။ ကုမ်ပဏီ လိပျစာ
၃။ လုပျရမညျ့ အလုပျအမြိုးအစား
၄။ အလုပျမှ တဈနာရီ ပေးငှေ (သတျမှတျ အနိမျ့ဆုံးလုပျခလစာ) အထိ ရေးသားတငျဆကျထားပါတယျ။
အခု နောကျအဆကျ (၅)မှ စရေး ပါမယျနျော။
၅။ အလုပျခြိနျ (စခြိနျ၊ဆငျးခြိနျ)
၈။ အလုပျလုပျရမယျ့ ကာလ (သတျမှတျနှဈ အရအေတှကျ)
■ အလုပျခြိနျ (စခြိနျ၊ဆငျးခြိနျ)
ဂပြနျနိုငျငံမှာ လူတဈယောကျရဲ့ အလုပျ လုပျ ခြိနျကို တဈနေ့ ၈ နာရီ သတျမှတျထားပါတယျ။ အလုပျစခြိနျက အလုပျဌာနအလိုကျ အခြိနျအမြိုးမြိုး ရှိပမေဲ့ မြားသောအားဖွငျ့ ပုံမှနျ အလုပျခြိနျကတော့ ၈ နာရီကွာ ပါပဲရှငျ့။ အလုပျခြိနျခညျြးပဲ ၈နာရီပါ။ နားခြိနျထညျ့တှကျရငျ ၈နာရီကြျော၊၉နာရီလောကျပေါ့။
( ၈နာရီထကျ ပိုလုပျ ရရငျတော့ အိုဗာတိုငျ/ အခြိနျပို ဆငျးတယျ ချေါပါတယျ။အခြိနျပိုက တဈနာရီ ရငှကေလညျး မူလပုံမှနျအလုပျခြိနျတဈနာရီခထကျ ၂၅% တိုးရ ရပါမယျ )။
တဈခါတခါ ညသနျးခေါငျ 深夜(しんや )အလုပျဆငျးပေးရတဲ့ အခြိနျမြိုးဆိုရငျ ပုံမှနျတဈနာရီ ရငှထေကျ ၃၅% ပိုရရပါဦးမယျ။ ရပိုငျခှငျ့ အမြိုးမြိုး ရှိတာကွောငျ့ ကိုယျ့ရပိုငျခှငျ့ ကိုယျ သခြောသိဖို့ လိုအပျပါတယျ နျော။
အလုပျနားခြိနျကတော့ တနေ့ ၈ နာရီ အလုပျ လုပျတဲ့ အခါ နားခြိနျက ၁ နာရီပေါ့။ ဒီတော့ အလုပျထဲ ၉ နာရီ ရှိရမယျလို့ ဆိုလိုခငျြတာပါရှငျ့။
တခြို့တှကေ ၂၄ နာရီ စကျရုံ အလုပျတှမေို့ စကျက မနားဘဲ လူပဲ တနေ့ ၈ နာရီကွာနှုနျး နဲ့ ခှဲလုပျကွရပါတယျ။ ဒီလို ကွုံလာရငျ သူငယျခငျြး ၃ ယောကျ စကျရုံသို့ အတူရောကျ အလုပျလုပျပမေဲ့ နဆေို့ငျး ညဆိုငျး ဆိုတဲ့ အခြိနျခှဲခွားခံထားရတဲ့ အခါ တယောကျနဲ့ တယောကျတောငျ သခြောမတှရေ့တာတှရှေိပါတယျ။ ဂပြနျရဲ့ ထူးခွားမှု တဈခုလို့ ပွောရမလား။ခံစားကွညျ့ပေါ့နျော။
တဈခြို့ အလုပျနားခြိနျ တဈနာရီကို သတျမှတျခြိနျ တဈနာရီလုံး ရတဲ့ ကုမ်ပဏီ/ဌာနတှေ ရှိသလို။ တခြို့ ကုမ်ပဏီ/ဌာနတှကေတော့ ၃၀မိနဈ + ၁၅မိနဈ + ၁၅ မိနဈ), ( ၃၀မိနဈ +၁၀မိနဈ +၁၀မိနဈ +၁၀မိနဈ ) ဆိုပွီး အမြိုးမြိုး ခှဲ နားပေးတာလညျး ရှိပါတယျ။ တဈခွားပုံစံနှငျ့ အနားပေးတာလညျး ရှိပါတယျနျော။
■ အလုပျ ပိတျရကျ
အလုပျပိတျရကျ ဆိုတာ ကတော့ မြားသောအားဖွငျ့ တဈပါတျ ၂ ရကျ ပိတျကွပါတယျ။ စနေ တနင်ျဂနှေ တှေ အပိတျမြားသလို။ စနေ တနင်ျဂနှေ ပိတျမရတဲ့ အလုပျတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဥပမာ ဆေးရုံ ဟိုတယျ စူပါမားကတျ စတာတှပေေါ့။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝငျတဲ့ အလုပျရဲ့ စာခြုပျပါအတိုငျးပဲ ပိတျရကျ သတျမှတျပေးပါတယျ။မရခဲ့ရငျ. စာခြုပျလေး သကျသပွေလို့ ရတာပေါ့နျော။
တကယျလို့ ..သတျမှတျပိတျရကျမှာ ဆငျးပေးရတဲ့အခါ ပိတျရကျဖွဈတဲ့အတှကျ ရိုးရိုးအလုပျရကျထကျ ငှပေိုရရမှာပါ။
ဂပြနျတှလေညျး တိကြ ကွပါတယျလေ။ ကိုယျလညျး တိကပြေးလိုကျပေါ့။
■ အလုပျမှ သတျမှတျ လစာ
ဆိုလိုခငျြတာက စာခြုပျထဲကလို လစာ လို့ ပွောပွီး။ ဂပြနျရောကျတဲ့ အခါ ထငျသလို ငှေ မရ ခဲ့ရငျ စာခြုပျပွပွီး အလုပျအခြိနျပေးဖို့ ငှပေေးဖို့ တောငျးဆိုလို့ ရပါတယျ။
( တဈခြို့ အလုပျပါးလို့ ဆိုပွီး အလုပျခြိနျလြှော့ ရငှလြေော့ တာတှေ ဖွဈတတျလို့ပါနျော)
■ အလုပျလုပျရမယျ့ ကာလ (သတျမှတျနှဈ အရအေတှကျ)
မွနျမာပွညျကနေ စာခြုပျခြုပျစဉျမှာ ကာလက ၃နှဈမှ ၅ နှဈ စာခြုပျပေါ့နျော။ ပုံမှနျကတော့ ၃နှဈမြားပါတယျနျော။
ခုနောကျပိုငျး ၃ နှဈ စာခြုပျတငျမက ၅ နှဈ စာခြုပျထိ လုပျခှငျ့ရတဲ့ စာခြုပျမြားပါ ရှိလာပါပွီမို့ ကံကောငျးသူတှလေညျး တိုးလာကွပါပွီ။ရှားတော့ ရှားပါသေးတယျလေ။
ဂပြနျရောကျလာရငျ စာခြုပျသကျတမျးအပွငျ နှဈစဉျ အလုပျသငျစှမျးရညျစာမေးပှဲဖွဆေိုပွီး သကျတမျးတိုးမတိုး ကှာခွားသှားတာလညျး မမပေ့ါနဲ့နျော။ စာမေးပှဲအောငျမှ သကျတမျးတိုးတာပါနျော။
စာခြုပျအကွောငျး တိုတိုလေးရေးရငျ ဒီလောကျပါပဲ။
MJ ရဲ့ ဒီတဈပါတျ စာကို ဒီလောကျနဲ့ပဲ ရပျခှငျ့ ပွုပါနျော။ ရှတေ့ဈပါတျမှာတော့ စာဖတျသူငယျခငျြးအားလုံး အတှကျ ဂပြနျနိုငျငံရောကျပွီးနောကျ အလုပျသငျကာလ ၃ နှဈတာ အတှကျ ပွငျဆငျခွငျး နှငျ့ ၅ နှဈတာအထိ နထေိုငျခှငျ့ ရမယျ့အကွောငျးလေးတှကေို ရေးပေးပါ့မယျနျော။
ဒီတော့ လာမဲ့ အကွိမျမှာ အလုပျသငျ ရဲ့ ၃ နှဈတာ ကာလအပွညျ့ ဂပြနျမှာ အောငျမွငျစှာ နထေိုငျကြျောဖွတျနိုငျရေးကို ရညျရှယျရေးပါမယျ။
မေးခငျြတာ ရှိရငျလညျး မေးထားနိုငျပါတယျလို့။
Previous Previous post: အလုပ်အမျိုးအစားတွေကို ဂျပန်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ IT・エンジニア系
Next Next post: Free Pass Ticket နှင့် Hakone သို့ အလည်တစ်ခေါက်